ဒူးရင်းသာကူပြင်တွေထဲ အရသာအကောင်းဆုံး ဘယ်တံဆိပ်လဲ? (Durian Sago Battle)
23 Aug 2018 . 5:46 PM
ခုခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ပေါ်က စကားအရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတဒူးရင်းသာကူပြင်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဘယ်နေရာဘာစားစား၊ ဘယ်နေရာ ဘယ်သွားသွား ဒူးရင်းသာကူပြင်တွေချည်း အတွေးထဲမှာရော၊ Newfeeds ပေါ်မှာပါ စက္ကန့်မလပ် စိုးမိုးနေပြီဆိုတာ ပရိသတ်ကြီး သိပါသလား?
ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ဒူးရင်းသာကူပြင်ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ တံဆိပ်အသစ်တွေ၊ အရသာအသစ်တွေနဲ့ ဆိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြိုင်အဆိုင်ထိုးဖောက်နေကြတာများ ဒူးရင်းသာကူပြင်မှ မစားရရင် လူဖြစ်ရကျိုးပဲ မနပ်တော့သလိုလို။ ကဲ…ဒီလောက် ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်နေတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်တွေထဲမှာ မိဘပြည်သူတွေအကြိုက် ဖြစ်စေမယ့် အရသာအကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ရာ အခရာမှာလည်း တာဝန်ရှိလာပြီမို့ တလုတ် ဆိုတလုတ် ဆွေမျိုးမေ့အောင်အီဆိမ့်မယ့် အကောင်းဆုံးကိုစားကြည့်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီတပတ် Battle ပွဲကြီးမှာတော့ ရှယ်ကောင်းတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်တို့ရဲ့ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ပွဲကြီး ကို စတင်လိုက်ပါပြီဗျား…
ဒူးရင်းသာကူပြင်တွေထဲက အကောင်းဆုံးဘုရင်ကို ရွေးချယ်ဖို့ရာ ဒီဇိုင်းအနေအထားကာလာနဲ့ စံနှုန်းသတ်မှတ်ရရင်-
(၆) ဈေးနှုန်း အဲ့ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ တိုင်းတာပါရစေ။ ဒါမှလည်း အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အကြိုက်အလိုက် ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမလဲသိမှာပေါ့…နော့်။
ဒါဆို လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲ လူကြိုက်များနေဆဲ တရားဝင် Brand ၃ခုဖြစ်တဲ့ Ambrosia နတ်သုဒ္ဓါ ရယ်၊ Wake n’ Bake ရယ်၊ ပုသိမ်ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးပို့ပေးနေတဲ့ နာမည်ကြီး ရွှေမြင်းရယ် ဆိုတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင် ၃ မျိုးကို ယှဉ်ပြပေးမယ်နော်။
(A) Ambrosia နတ်သုဒ္ဓါ
(၁) သူ့ရဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်က ဒူးရင်းသီးအနံ့ရော၊ အရသာပါ သိသိသာသာခံစားရတာမျိုး။ လောလောလတ်လတ်ဝယ်ပြီးပြီးချင်းစားရင် ပိုတောင်သိသာသေး။ ဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အနံ့က လှိုင်တက်လာတာများ တော်ရုံ ဒူးရင်းသီးသရဲတွေ တင်းမခံနိုင်ဘူး။
(၂) အပေါ်ထပ်ဒူးရင်းသီးနဲ့အုန်းနို့ပြင်ကတော့ သူက အကောင်းဆုံးလို့ ညွှန်းရမယ်။ ဘာလို့ဆို ဒူးရင်း၊ အုန်းနို့အပြင် ကြက်ဥပါထည့်ထားလို့ တစ်ဇွန်းခပ်လိုက်တာနဲ့ အိတုန်တုန်လေး။ အုန်းနို့ရော ဒူးရင်းအရသာရောက အရမ်းကြီး မလေးဘဲ အဆိမ့်ဘက်ပိုကဲတယ်။ ချိုတာထက် ဆိမ့်ပြီးဒူးရင်းသီးရဲ့ အချိုဓါတ်နဲ့တင် အရသာပြည့်ဝနေတာမျိုး။ ပြီးတော့ အုန်းနို့လွှာက တစ်ခုလုံးရဲ့ ၅ပုံ ၂ပုံလောက်အလွှာရှိတယ်။
(၃) အောက်ထပ်သာကူပြင်အလွှာကတော့ ချိုတယ်ဆိုရုံလေးပဲ။ တော်တော်လေးကို ပေါ့တယ်။ သာကူကလည်း အစိလိုက်လေး ပြီးတော့ အရသာဝင်တယ်ဆိုရုံလေး။ သူ့ချည်းစားရင်တော့ အရသာကိုမရှိတာ။
(၄) လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းမှုကတော့ တကယ် မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ဝယ်ပြီးပြီးချင်းကနေ တရက်ထိ အထားခံတယ်တဲ့။
(၅) ထုပ်ပိုးမှုကတော့ သူ့ကို အမှတ်ပြည့်ပေးရမယ်။ ဂန္ဓဝင်ဆန်ဆန်ရှေးခေတ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ နတ်သုဒ္ဓါဆိုတာနဲ့ ဘူးဒီဇိုင်းပါပြေးမြင်နေမိတာနော်။ ဒါပေမယ့် ခွက်ဒီဇိုင်းတွေ လက်ရာမမှန်လွန်းတော့ ဈေးပါလိုက်ချိန်နေရတာ အလုပ်တစ်လုပ်။
(၆) ဈေးနှုန်းကတော့ ကြီးတယ်။ ခုဆို တဆင့်ပြန်ရောင်းနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဆို ပိုဈေးကြီးတယ်။ တော်ရုံပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝယ်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝမပြေပါဘူး။ သူဌေးတွေကလွဲပြီး ကျန်သူတွေ စားဖူးရုံ၊ အာသာပြေရုံလောက်ပဲ ဝယ်စားနိုင်မယ့်ဈေးမျိုး။
(B) Wake n’ Bake
(၁) သူ့ဗူးက ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဒူးရင်းသီးအနံ့ ခပ်သင်းသင်းလေးရတယ်။ ဒူးရင်းဖတ်လေးတွေပါ တချက်တချက်ဝါးမိသေးတယ် ဆိုတော့ ဒူးရင်းသီးပါဝင်မှုအပိုင်းတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ဒူးရင်းဖတ်ပါ ထိထိမိမိဝါးရတာ ဒီတစ်ခုတော့ မိုက်တယ်။
(၂) ဒူးရင်းသာကူပြင်တဲ့။ ဘုရားစူး ဒူးရင်းအုန်းနို့လွှာ ခပ်ပါးပါးလေးပဲပါတယ်။ တကယ်ပါးပါးလေးရယ်။ အရသာကတော့ ချိုလေးစိမ့် မဆိုးပါဘူး။
(၃) အောက်က သာကူပြင်ကကျ အထူကြီး။ ဒူးရင်းနဲ့ သာကူတွဲစားဖို့ဆို သာကူအရသာက ပိုများနေတာမျိုး ခံစားရတယ်။ သာကူစေ့အနေအထားကတော့ မပျော့မမာ အတော်ပါပဲ။ အရသာကတော့ သာကူကအစ အရသာရှိတယ်။
(၄) လတ်ဆတ်မှုကတော့ အားနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တုန်းက တရက်ကြိုလုပ်ထားတာကို အအေးခံထားတာဆိုတော့အရောင်ကအစ ဝင်းဝင်းဝါဝါမရှိဘူး။ အပေါ်ယံကြောမာတင်းပြီး အေးအေးကြီး စားရတာ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ သန့်ရှင်းမှုတော့ အသင့်အတင့် ရှိတယ်ဆိုရမယ်။
(၅) ထုပ်ပိုးပေးတာကတော့ ပုံမှန်သာကူပြင် ဘူးလေးနဲ့ပါပဲ။ ဆိုင်တံဆိပ်လေးနဲ့ ရိုးရိုးလေးရယ်။
(၆) ဈေးနှုန်းကတော့ တော်တော်လေးသက်သာတယ်။ ၂၅၀၀ တန်ရယ်၊ ၃၀၀၀ တန်ရယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ တော်တော်တန်တဲ့ထဲပါတယ်။
ဒီနာမည်ကြီး မြန်မာမုန့်မျိုးစုံရတဲ့ ရွှေမြင်းတံဆိပ်ကတော့ ပုသိမ်ကနေတောင် တကူးတကမှာစားကြရတာဆိုပဲ။
(၁) ဒူးရင်းသီးပါဝင်မှုကတော့ အနံ့ခပ်သင်းသင်းလေးပါပါတယ်။ စားလိုက်တိုင်းဒူးရင်း အနံ့အရသာကိုလည်း ခံစားမိတယ်။
(၂) ထူးထူးဆန်းဆန်းသူ့သာကူပြင်က ဒူးရင်းအုန်းနို့ပြင်တဝက်၊ သာကူပြင်စေ့တဝက်စီပါတာ။ အလဲ့။ ဒူးရင်းအုန်းနို့လွှာကတော့ အကုန်လုံးကိုမွှေပြီး ဖြန့်ဖုတ်ထားသလိုပဲ အရသာချိုလေးလေး လေးနဲ့ ဆိမ့်နေတာပဲ။
(၃) အောက်က သာကူစေ့လေးကတော့ နည်းနည်းပါးပါး ကြေနေတာ တွေ့ရတယ်။ သာကူအစေ့လိုက်လေးမှ ကြိုက်တဲ့ကိုယ်ကတော့ သာကူစေ့လေးတွေမဆိုစလောက်ကြေနေပေမယ့် သာကူပြင်ထိပါအရသာရှိတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲစားကောင်းလို့ ကျေနပ်မိတယ်ပေါ့နော်။ သာကူလွှာကြားထဲမှာပါ အုန်းနို့သားကစိမ့်ဝင်နေသေး။
(၄) လတ်ဆတ်မှုကတော့ သူ့ဘူးပေါ်က Expired Date မတိုင်ခင်အတွင်း စားရင် စားကောင်းတယ်။ လတ်ဆတ်တယ်။ မဆိုးဘူး။
(၅) ထုပ်ပိုးမှုကတော့ ဗမာဆန်ဆန်ပဲ။ စက္ကူဘူးလေးနဲ့ ဇွန်းလေးနဲ့ ခပ်ရိုးရိုးလေးပဲ။
(၆) ဈေးကတော့ အတန်တကာ့အတန်ဆုံးဆိုရမယ် ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ဘူးမှ ၃၅၀၀ ပဲပေးရတယ်။ တစ်ဗူးဆို ၂ယောက်အဝ အီဆိမ့်နေအောင်စားပါလိမ့်။ ဘက်ဂျက်လည်း ကိုက်တယ်။ မှာရင် အောင်ဆန်းကွင်းမှာယူရတာလေးတစ်ခုတည်းပဲ။
ကဲ…ဒူးရင်းသာကူတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးကို အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်တွေကတော့ ဒီမှာတင်ပဲ တစ်စခန်းရပ်ပါပြီနော်။ အရသာပိုင်း ချိုအီစိမ့်၊လတ်ဆတ်မှု အတန်အသင့်နဲ့ ဈေးအတန်ဆုံးဗမာကြိုက် လက်ရာဆိုရင်တော့ ရွှေမြင်း က လုံးဝမှာစားကြည့်သင့်တဲ့ တကယ့်ဒူးရင်းသာကူပြင် အထူကြီးဖြစ်ပြီး အချိုထက် အစိမ့်နဲ့ နူးညံ့အိနေတဲ့ ဒူးရင်းသာကူပြင်အတွက်တော့ မင်းကြိုက်စိုးကြိုက်ဖြစ်လာတဲ့ Ambrosia က ဈေးကြီးတာကလွဲ ရှယ်တကာ့ရှယ် အပေါ်ယံ ဒူးရင်းအုန်းနို့လွှာမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ညွှန်းပါရစေ။ ဘက်ဂျက်သမားတွေ၊ ဒူးရင်းသာကူကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အာသာပြေရုံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wake n’ Bake ကတော့ ဒူးရင်းဖတ်လေးတွေပါဝါးရတဲ့ သာကူပြင်လို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
သွေးတိုးသမားတွေနဲ့ လူကြီးတွေအတွက်တော့ Ambrosia ကပိုသင့်တော်ပြီး တော်ရုံနဲ့မဝတတ်ဘဲ ဒူးရင်းအုန်းနို့ပြင် အီဆိမ့်မူးနေအောင်စားဖို့ဆို ရွှေမြင်းပဲရွေးလို့ရပါတယ်။ Wake n’ Bake ကတော့ နီးနီးနားနားအဆင်ပြေပြေ ဝယ်လို့ရတာမို့ ဈေးတန်၊ ဝန်ပေါ့လို့ ခနခနဝယ်စားလို့ရပါတယ်။
ကဲ…ဒီလောက်ဆို တစ်ရင်းထဲရင်းနေကြတဲ့ ရှယ်တကာ့ရှယ်ဒူးရင်းသာကူပြင်တွေကို အကောင်းဆုံးတွေမှ ရွေးထုတ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ် အပြိုင်အဆိုင်ရွေးချယ်လို့ အမိုက်ဆုံးအရသာကို တင်ပြပေးလိုက်ပြီနော်။ ၃ခုလုံး မစားဖူးသေးရင်တော့ ဒူးရင်းခရေဇီမပီသဘူးပြောရမယ်။ စားဖူးသွားရင်တော့ အကောင်ပဲ…ဒူးရင်းသီးအသံကြားတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အကြောပေါင်းတထောင် ကြွတက်လာတဲ့ ဒူးရင်းသီးမှာဆရာကျတဲ့အကောင်ဗျို့။ ဖတ်သွားပြီးရင် ဝယ်စားပြီး ဘယ်တစ်ခုကို ပိုကြိုက်လဲ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ၊ ဆွေးနွေးကြရအောင်ဗျား။
ဒူးရငျးသာကူပွငျတှထေဲ အရသာအကောငျးဆုံး ဘယျတံဆိပျလဲ? (Durian Sago Battle)
ခုခတျေစားနတေဲ့ Facebook ပျေါက စကားအရ ပွညျထောငျစုသမ်မတဒူးရငျးသာကူပွငျနိုငျငံတျောကွီးမှာ ဘယျနရောဘာစားစား၊ ဘယျနရော ဘယျသှားသှား ဒူးရငျးသာကူပွငျတှခေညျြး အတှေးထဲမှာရော၊ Newfeeds ပျေါမှာပါ စက်ကနျ့မလပျ စိုးမိုးနပွေီဆိုတာ ပရိသတျကွီး သိပါသလား?
ဘယျနရောကွညျ့ကွညျ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျခတျေစားနတေဲ့အခြိနျမှာ တံဆိပျအသဈတှေ၊ အရသာအသဈတှနေဲ့ ဆိုငျတဈခုနဲ့တဈခု အပွိုငျအဆိုငျထိုးဖောကျနကွေတာမြား ဒူးရငျးသာကူပွငျမှ မစားရရငျ လူဖွဈရကြိုးပဲ မနပျတော့သလိုလို။ ကဲ…ဒီလောကျ ဟိုးလေးတကွျောဖွဈနတေဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျတှထေဲမှာ မိဘပွညျသူတှအေကွိုကျ ဖွဈစမေယျ့ အရသာအကောငျးဆုံးကို ရှေးခယျြပေးဖို့ရာ အခရာမှာလညျး တာဝနျရှိလာပွီမို့ တလုတျ ဆိုတလုတျ ဆှမြေိုးမအေ့ောငျအီဆိမျ့မယျ့ အကောငျးဆုံးကိုစားကွညျ့စခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့ ဒီတပတျ Battle ပှဲကွီးမှာတော့ ရှယျကောငျးတဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျတို့ရဲ့ အကွိတျအနယျပွိုငျပှဲကွီး ကို စတငျလိုကျပါပွီဗြား…
ဒူးရငျးသာကူပွငျတှထေဲက အကောငျးဆုံးဘုရငျကို ရှေးခယျြဖို့ရာ ဒီဇိုငျးအနအေထားကာလာနဲ့ စံနှုနျးသတျမှတျရရငျ-
(၆) ဈေးနှုနျး အဲ့ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ တိုငျးတာပါရစေ။ ဒါမှလညျး အကောငျးဆုံးကို ရှေးခယျြတဲ့နရောမှာ ကိုယျ့အကွိုကျအလိုကျ ဘယျတဈခုကို ရှေးခယျြရမလဲသိမှာပေါ့…နေျာ့။
ဒါဆို လကျရှိ ဈေးကှကျထဲ လူကွိုကျမြားနဆေဲ တရားဝငျ Brand ၃ခုဖွဈတဲ့ Ambrosia နတျသုဒ်ါဓ ရယျ၊ Wake n’ Bake ရယျ၊ ပုသိမျကနေ တဈနိုငျငံလုံးပို့ပေးနတေဲ့ နာမညျကွီး ရှမွေငျးရယျ ဆိုတဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျ ၃ မြိုးကို ယှဉျပွပေးမယျနျော။
(A) Ambrosia နတျသုဒ်ါဓ
(၁) သူ့ရဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျက ဒူးရငျးသီးအနံ့ရော၊ အရသာပါ သိသိသာသာခံစားရတာမြိုး။ လောလောလတျလတျဝယျပွီးပွီးခငျြးစားရငျ ပိုတောငျသိသာသေး။ ဘူးကိုဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ အနံ့က လှိုငျတကျလာတာမြား တျောရုံ ဒူးရငျးသီးသရဲတှေ တငျးမခံနိုငျဘူး။
(၂) အပျေါထပျဒူးရငျးသီးနဲ့အုနျးနို့ပွငျကတော့ သူက အကောငျးဆုံးလို့ ညှနျးရမယျ။ ဘာလို့ဆို ဒူးရငျး၊ အုနျးနို့အပွငျ ကွကျဥပါထညျ့ထားလို့ တဈဇှနျးခပျလိုကျတာနဲ့ အိတုနျတုနျလေး။ အုနျးနို့ရော ဒူးရငျးအရသာရောက အရမျးကွီး မလေးဘဲ အဆိမျ့ဘကျပိုကဲတယျ။ ခြိုတာထကျ ဆိမျ့ပွီးဒူးရငျးသီးရဲ့ အခြိုဓါတျနဲ့တငျ အရသာပွညျ့ဝနတောမြိုး။ ပွီးတော့ အုနျးနို့လှာက တဈခုလုံးရဲ့ ၅ပုံ ၂ပုံလောကျအလှာရှိတယျ။
(၃) အောကျထပျသာကူပွငျအလှာကတော့ ခြိုတယျဆိုရုံလေးပဲ။ တျောတျောလေးကို ပေါ့တယျ။ သာကူကလညျး အစိလိုကျလေး ပွီးတော့ အရသာဝငျတယျဆိုရုံလေး။ သူ့ခညျြးစားရငျတော့ အရသာကိုမရှိတာ။
(၄) လတျဆတျသနျ့ရှငျးမှုကတော့ တကယျ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။ ဝယျပွီးပွီးခငျြးကနေ တရကျထိ အထားခံတယျတဲ့။
(၅) ထုပျပိုးမှုကတော့ သူ့ကို အမှတျပွညျ့ပေးရမယျ။ ဂန်ဓဝငျဆနျဆနျရှေးခတျေဒီဇိုငျးလေးနဲ့ နတျသုဒ်ါဓဆိုတာနဲ့ ဘူးဒီဇိုငျးပါပွေးမွငျနမေိတာနျော။ ဒါပမေယျ့ ခှကျဒီဇိုငျးတှေ လကျရာမမှနျလှနျးတော့ ဈေးပါလိုကျခြိနျနရေတာ အလုပျတဈလုပျ။
(၆) ဈေးနှုနျးကတော့ ကွီးတယျ။ ခုဆို တဆငျ့ပွနျရောငျးနကွေတဲ့သူတှနေဲ့ဆို ပိုဈေးကွီးတယျ။ တျောရုံပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝယျစားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ လုံးဝမပွပေါဘူး။ သူဌေးတှကေလှဲပွီး ကနျြသူတှေ စားဖူးရုံ၊ အာသာပွရေုံလောကျပဲ ဝယျစားနိုငျမယျ့ဈေးမြိုး။
(၁) သူ့ဗူးက ဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ ဒူးရငျးသီးအနံ့ ခပျသငျးသငျးလေးရတယျ။ ဒူးရငျးဖတျလေးတှပေါ တခကျြတခကျြဝါးမိသေးတယျ ဆိုတော့ ဒူးရငျးသီးပါဝငျမှုအပိုငျးတော့ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။ ဒူးရငျးဖတျပါ ထိထိမိမိဝါးရတာ ဒီတဈခုတော့ မိုကျတယျ။
(၂) ဒူးရငျးသာကူပွငျတဲ့။ ဘုရားစူး ဒူးရငျးအုနျးနို့လှာ ခပျပါးပါးလေးပဲပါတယျ။ တကယျပါးပါးလေးရယျ။ အရသာကတော့ ခြိုလေးစိမျ့ မဆိုးပါဘူး။
(၃) အောကျက သာကူပွငျကကြ အထူကွီး။ ဒူးရငျးနဲ့ သာကူတှဲစားဖို့ဆို သာကူအရသာက ပိုမြားနတောမြိုး ခံစားရတယျ။ သာကူစအေ့နအေထားကတော့ မပြော့မမာ အတျောပါပဲ။ အရသာကတော့ သာကူကအစ အရသာရှိတယျ။
(၄) လတျဆတျမှုကတော့ အားနညျးတယျလို့ခံစားရတယျ။ ကိုယျဝယျခဲ့တုနျးက တရကျကွိုလုပျထားတာကို အအေးခံထားတာဆိုတော့အရောငျကအစ ဝငျးဝငျးဝါဝါမရှိဘူး။ အပျေါယံကွောမာတငျးပွီး အေးအေးကွီး စားရတာ အဆငျမပွခေဲ့ဘူး။ သနျ့ရှငျးမှုတော့ အသငျ့အတငျ့ ရှိတယျဆိုရမယျ။
(၅) ထုပျပိုးပေးတာကတော့ ပုံမှနျသာကူပွငျ ဘူးလေးနဲ့ပါပဲ။ ဆိုငျတံဆိပျလေးနဲ့ ရိုးရိုးလေးရယျ။
(၆) ဈေးနှုနျးကတော့ တျောတျောလေးသကျသာတယျ။ ၂၅၀၀ တနျရယျ၊ ၃၀၀၀ တနျရယျရှိတယျဆိုတော့ တျောတျောတနျတဲ့ထဲပါတယျ။
ဒီနာမညျကွီး မွနျမာမုနျ့မြိုးစုံရတဲ့ ရှမွေငျးတံဆိပျကတော့ ပုသိမျကနတေောငျ တကူးတကမှာစားကွရတာဆိုပဲ။
(၁) ဒူးရငျးသီးပါဝငျမှုကတော့ အနံ့ခပျသငျးသငျးလေးပါပါတယျ။ စားလိုကျတိုငျးဒူးရငျး အနံ့အရသာကိုလညျး ခံစားမိတယျ။
(၂) ထူးထူးဆနျးဆနျးသူ့သာကူပွငျက ဒူးရငျးအုနျးနို့ပွငျတဝကျ၊ သာကူပွငျစတေ့ဝကျစီပါတာ။ အလဲ့။ ဒူးရငျးအုနျးနို့လှာကတော့ အကုနျလုံးကိုမှပွေီး ဖွနျ့ဖုတျထားသလိုပဲ အရသာခြိုလေးလေး လေးနဲ့ ဆိမျ့နတောပဲ။
(၃) အောကျက သာကူစလေ့ေးကတော့ နညျးနညျးပါးပါး ကွနေတော တှရေ့တယျ။ သာကူအစလေို့ကျလေးမှ ကွိုကျတဲ့ကိုယျကတော့ သာကူစလေ့ေးတှမေဆိုစလောကျကွနေပေမေယျ့ သာကူပွငျထိပါအရသာရှိတော့ ဘယျလိုပွောရမလဲစားကောငျးလို့ ကနြေပျမိတယျပေါ့နျော။ သာကူလှာကွားထဲမှာပါ အုနျးနို့သားကစိမျ့ဝငျနသေေး။
(၄) လတျဆတျမှုကတော့ သူ့ဘူးပျေါက Expired Date မတိုငျခငျအတှငျး စားရငျ စားကောငျးတယျ။ လတျဆတျတယျ။ မဆိုးဘူး။
(၅) ထုပျပိုးမှုကတော့ ဗမာဆနျဆနျပဲ။ စက်ကူဘူးလေးနဲ့ ဇှနျးလေးနဲ့ ခပျရိုးရိုးလေးပဲ။
(၆) ဈေးကတော့ အတနျတကာ့အတနျဆုံးဆိုရမယျ ခပျဝိုငျးဝိုငျးကွီးတဈဘူးမှ ၃၅၀၀ ပဲပေးရတယျ။ တဈဗူးဆို ၂ယောကျအဝ အီဆိမျ့နအေောငျစားပါလိမျ့။ ဘကျဂကျြလညျး ကိုကျတယျ။ မှာရငျ အောငျဆနျးကှငျးမှာယူရတာလေးတဈခုတညျးပဲ။
ကဲ…ဒူးရငျးသာကူတို့ရဲ့ ပွိုငျပှဲကွီးကို အသေးစိတျသုံးသပျခကျြတှကေတော့ ဒီမှာတငျပဲ တဈစခနျးရပျပါပွီနျော။ အရသာပိုငျး ခြိုအီစိမျ့၊လတျဆတျမှု အတနျအသငျ့နဲ့ ဈေးအတနျဆုံးဗမာကွိုကျ လကျရာဆိုရငျတော့ ရှမွေငျး က လုံးဝမှာစားကွညျ့သငျ့တဲ့ တကယျ့ဒူးရငျးသာကူပွငျ အထူကွီးဖွဈပွီး အခြိုထကျ အစိမျ့နဲ့ နူးညံ့အိနတေဲ့ ဒူးရငျးသာကူပွငျအတှကျတော့ မငျးကွိုကျစိုးကွိုကျဖွဈလာတဲ့ Ambrosia က ဈေးကွီးတာကလှဲ ရှယျတကာ့ရှယျ အပျေါယံ ဒူးရငျးအုနျးနို့လှာမှာတော့ အကောငျးဆုံးလို့ ညှနျးပါရစေ။ ဘကျဂကျြသမားတှေ၊ ဒူးရငျးသာကူကို လှယျလှယျကူကူနဲ့ အာသာပွရေုံစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ Wake n’ Bake ကတော့ ဒူးရငျးဖတျလေးတှပေါဝါးရတဲ့ သာကူပွငျလို့ ညှနျးလိုကျပါရစေ။
သှေးတိုးသမားတှနေဲ့ လူကွီးတှအေတှကျတော့ Ambrosia ကပိုသငျ့တျောပွီး တျောရုံနဲ့မဝတတျဘဲ ဒူးရငျးအုနျးနို့ပွငျ အီဆိမျ့မူးနအေောငျစားဖို့ဆို ရှမွေငျးပဲရှေးလို့ရပါတယျ။ Wake n’ Bake ကတော့ နီးနီးနားနားအဆငျပွပွေေ ဝယျလို့ရတာမို့ ဈေးတနျ၊ ဝနျပေါ့လို့ ခနခနဝယျစားလို့ရပါတယျ။
ကဲ…ဒီလောကျဆို တဈရငျးထဲရငျးနကွေတဲ့ ရှယျတကာ့ရှယျဒူးရငျးသာကူပွငျတှကေို အကောငျးဆုံးတှမှေ ရှေးထုတျပွီး တဈခုခငျြးစီ အသေးစိတျ အပွိုငျအဆိုငျရှေးခယျြလို့ အမိုကျဆုံးအရသာကို တငျပွပေးလိုကျပွီနျော။ ၃ခုလုံး မစားဖူးသေးရငျတော့ ဒူးရငျးခရဇေီမပီသဘူးပွောရမယျ။ စားဖူးသှားရငျတော့ အကောငျပဲ…ဒူးရငျးသီးအသံကွားတာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက အကွောပေါငျးတထောငျ ကွှတကျလာတဲ့ ဒူးရငျးသီးမှာဆရာကတြဲ့အကောငျဗြို့။ ဖတျသှားပွီးရငျ ဝယျစားပွီး ဘယျတဈခုကို ပိုကွိုကျလဲ ငွငျးကွ၊ ခုနျကွ၊ ဆှေးနှေးကွရအောငျဗြား။